Warshada soo saaraha budada Urolithin A & B ee ugu fiican
Cofttek waxay awood u leedahay inay soo saarto tiro badan iyo bixinta budada Urolithin A; Budada Urolitin B; 8-O-Methylurolithin A budada ah oo ku jirta xaalad cGMP. Iyo awoodda wax-soo-saarka bishiiba 820KG.
Soo iibso budada Urolitin
COA ee Urolitin A budada
COA ee budada Urolitin B
COA ee 8-O-Methylurolithin A budada
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato Urolithin A & B Powder, markaa tani waa hagaha aad u baahan tahay; Hubi inaad akhriday dhammaan 24 FAQ.
Waa maxay Urolithins?
> Unugyada Urolithin ee la yaqaan
> Urolitin A Xidhmada Macluumaadka Budada
> Xidhmada macluumaadka budada Urolithin B
Sidee bay Urolithins u shaqeeyaan?
> Faa'iidooyinka Urolithins
> Qiyaasta urolithins
> Ilaha cuntada ee Urolithins
Maxay tahay sababta aad uga iibsanayso warshadeena soo saaraha?
Waa maxay Urolitin A?
Sidee Urolitin u shaqeysaa?
Waa maxay miraha ka kooban Urolitin A?
Waa maxay Urolitin loo isticmaalo?
Maxay Urolithin u fiican tahay?
Cuntooyinkee ka kooban Urolitin A?
Waa maxay faa'iidooyinka Urolitin A?
Sideen uga helnaa Urolitin A cunnooyinkayada?
Waa maxay Mitopure?
Mitopure ma u badbaado isticmaalka bini'aadamka?
Goorma ayaan qaadanayaa Mitopure?
Waa maxay Urolithin kabitaan?
> Faa'iidooyinka dheeraadka ah ee Urolitin A
Waa maxay Urolitin B?
Urolithins waa derivatives ama dheef -shiid kiimikaadka qaybaha ellagic acid sida ellagitannins. Qeybahaan kiimikada ah waxaa laga metaboliyey ka-soo-saarka ellagic acid-ka microbiota mindhicirka.
Maaddaama ubaxa xiidmaha uu muhiim u yahay soo -saarka urolithins, xaddiga urolithins -ka laga soo saaro jirka waxay ku xiran tahay nooca noolaha flora, noolaha ugu muhiimsan ee iska leh kooxda Clostridium leptum. Waxaa la soo wariyay in dadka leh mikrobiota hodanka ku ah xubnaha kooxdan ay soo saaraan tiro aad u badan oo urolithins ah marka loo eego kuwa leh flora kale ee mindhicirka sida Bacteroides ama Prevotella.
Urolithins ayaa sidoo kale laga soo saaraa punicalagin ee mindhicirka, sida ellagitannins, ka dibna ka soo baxa kaadida. Si loo hubiyo wax soo saarka urolithin ee jirka, heerarkoodu waxay u baahan yihiin in lagu hubiyo kaadida qofka cunay cuntooyinka hodanka ku ah ellagic acid ama kaabayaasha urolithins oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan. Urolithin, oo mar ku jirta plasma, ayaa lagu ogaan karaa qaabka glucuronides.
Urolithins si dabiici ah ayaa looga heli karaa cuntooyin dhowr ah, in kasta oo aan dhammaan maaddooyinka urolithins laga soo qaadan karo cuntada. Marka cuntooyinka hodanka ku ah aashitada ellagic, waxay kuxirantahay ubaxa mindhicirka si loo burburiyo ellagitannins iyo punicalagin oo lagu sii daro dheef -shiid kiimikaadka dhexdhexaadka ah iyo alaabada dhammaadka ah; molecules urolithin.
Moleekuladaani waxay dhowaan heleen sumcad waxayna sii wadaan inay u kacaan sidii kaabitaanno aad u sarreeya sababtoo ah ka-hortagga burooyinka, ka-hortagga gabowga, ka-hortagga bararka, iyo faa'iidooyinka soo-kicinta. Intaa waxaa sii dheer, molecules urolithin gaar ah waxay la xiriiraan heerarka tamarta oo hagaagay maadaama ay saameyn weyn ku leeyihiin caafimaadka mitokondrial. Soosaarka tamarta ee jirka waa geedi socod ka dhaca mitochondria, iyo hagaajinta shaqeynta xubintaan waa mid ka mid ah shaqooyinka badan ee Urolithins.
Molecules -ka la yaqaan ee Urolithin
Urolithins waxay si wada jir ah u tixraacaan molecules kala duwan oo ka tirsan qoyska urolithin laakiin leh qaabab kiimiko oo kala duwan, magacyada IUPAC, dhismayaasha kiimikada, iyo ilo. Waxaa intaa dheer, molecules -ku waxay leeyihiin faa iidooyin iyo faa'iidooyin aad u kala duwan oo ku yaal jirka aadanaha sidaa darteedna si ka duwan ayaa loogu xayeysiiyaa foomka kabka.
Urolithins, cilmi baaris dheer ka dib, waxaa la og yahay inay u jajabaan unugyada soo socda ee jirka, inkastoo aan wax badan laga ogeyn molecule kasta oo gaar ah: ●Urolithin A (3,8-Dihydroxy Urolithin)
Urolithin A iyo Urolithin B, oo inta badan loo yaqaan UroA iyo UroB siday u kala horreeyaan, waa dheef-shiid kiimikaadka loo yaqaan Urolithins ee jirka. Labadani sidoo kale waa molecules -ka hadda loo adeegsado dheellitirka iyo budo beddelidda cuntada.
Mar dhiiga ku jira, Urolithin A wuxuu u jiraa Urolithin A glucuronide, Urolithin B waxaa lagu ogaan karaa Urolithin B glucuronide. Sababtaas awgeed, waxaa la rumeysan yahay inay leeyihiin saamayn la mid ah kuwa hordhac u ah sida daraasadaha vivo aysan u suurtagelin urolithins. La'aanta daraasadaha vivo ayaa adkeyneysa in la qiimeeyo haddii UroA iyo UroB glucuronides ay leeyihiin saameyn ka duwan UroA iyo UroB laftooda.
Urolithin A wuxuu leeyahay derivative kale oo lagu ogaan karo dhiigga, oo ah, Urolithin A sulfate. Dhammaan waxyaalahan soo -saarka ahi waxay ku qabtaan hawlahooda dhiigga ka dibna kaadida ayaa nidaamka lagaga nadiifiyaa.
Urolithin D waa unug kale oo muhiim ah oo ay soo saarto saamaynta microbiota mindhicirka, si kastaba ha ahaatee, wax badan lagama oga saameyntiisa iyo isticmaalkeeda. Waqtigan xaadirka ah, looma isticmaalo wax kaabis ah ama beddelaad cunto, oo ka duwan kuwa dhiggeeda ah, UroA iyo UroB. Intaa waxaa dheer, ilaha cuntada ee Urolitin D lama yaqaan
Urolithin Xidhmada Macluumaadka budada
Urolithin A si dabiici ah looma heli karo ilaha cuntada waxayna ka tirsan tahay kooxda xeryahooda loo yaqaan benzo-coumarins ama dibenzo-α-pyrones. Dhab ahaantii waa metabolized laga bilaabo ellagitannins ilaa Urolithin A 8-Methyl Ether ka hor inta aan lagu sii jebin Urolithin A. Badeecadan dhammaadkeeda waxaa laga heli karaa si weyn wershadeena wax-soo-saarka qaab ah budada Urolithin A. MethylUrolithin Budo ayaa sidoo kale la heli karaa si aad u iibsato haddii loo baahdo.
Urolithin A laguma heli karo heerar isku mid ah, xitaa leh heerar isku mid ah oo la adeegsado horudhacyadiisa, dad kala duwan maxaa yeelay waxay dhammaan ku tiirsan tahay waxqabadka microbiota mindhicirka. Dheef -shiid kiimikaadka Urolithin A ayaa la rumeysan yahay inuu u baahan yahay Gordonibacter urolithinfaciens iyo Gordonibacter pamelaeae laakiin dadka qaarkiis ayaa weli muujiya inay aad u yar yihiin oo aysan wax saamayn ah ku yeelan soo -saarka molecule -ka.
Urolithin A waxay leedahay astaamo gaar ah oo ka dhiga inay ka soocdo qaybaha kale, sida kuwa ku xusan shaxda hoose.
3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-kow
3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-mid; 3,8-DIHYDRO DIBENZO- (B, D) PYRAN-6-ONE; 3, 8-Dihydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-one; Midabka Castoreum I; Urolithin A; 6H-Dibenzo (B, D) pyran-6-mid, 3,8-dihydroxy-; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzopyran-6-one); urolithin-A (UA; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-one
Budada Jaale khafiifa
Dhibaatada DMSO (3 mg / mL).
Maalmaha ilaa Toddobaadyada: Qol mugdi ah, qallalan 0 -4 digrii C Bilaha ilaa Sannadaha: Qaboojiyaha, ka fog dareeraha -20 digrii C.
Cuntada ayaa loo adeegsadaa beddelka cuntada iyo kaabisyada
Xidhmada Macluumaadka budada Urolithin B
Urolithin B waa isku-darka phenolic oo kaliya bilaabay in si baaxad leh loo soo saaro tan iyo bishii Janaayo ee 2021. Waxaa lagu heli karaa iyadoo la cuno cunno dhowr ah oo ah ilo dabiici ah oo ellagitannins ah oo lagu dheefsan karo Urolithin B. Waxaa la ogaaday inay awood leedahay xarunta ka hortagga gabowga oo aad ku iibsan karto qaab badan oo ah budada Urolithin B.
Guryaha kala duwan ee budada Urolithin B ee laga heli karo shirkadeena wax soo saarka ayaa hoos ku xusan:
AURORA 226; Urolithin B; AKOS BBS-00008028; 3-hydroxy urolithin; 3-hydroxy-6-benzo [c] chromenone; 3-hydroxybenzo [c] chromen-6-one; 3-Hydroxy-benzo [c] chromen-6-mid; 3-HYDROXY-6H-DIBENZO [B, D] PYRAN-6-ONE; 6H-Dibenzo (b, d) pyran-6-one, 3-hydroxy-; 3-Hydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-one AldrichCPR
Budada khafiifka ah
Lagu milmi karo 5mg/mL marka la diiriyo, dareere cad
Anti-oxidant iyo Pro-oxidant dheeri ah oo leh firfircoonaanta estrogenic.
Marka laga reebo molecules -kan ugu weyn ee Urolithins ee loo sameeyay natiijada falalka mindhicirka, waxaa jira dhowr molecules oo ah dhex -dhexaadin la sameeyay intii lagu jiray burburka horudhaca. Dhexdhexaadiyayaashan waxaa ka mid ah:
Wax badan lagama oga dhex -dhexaadiyayaashan illaa hadda, hase yeeshe, cilmi -baaris dheeri ah ayaa awood u leh inay ogaato faa'iidooyinka iyo adeegsiga maaddooyinkaan Urolithin.
Sidee Urolithins u shaqeeyaa?
Urolithins, sida xeryahooda kale ee loo isticmaalo dheellitirka, waxay saameeyaan xubnaha iyo nidaamyada kala duwan ee jirka, si ay u soo saaraan saameyntooda waxtarka leh. Farsamaynta ficilka Urolithins, A iyo B labadaba, waxaa loo qaybin karaa lix laamood oo waaweyn, laan kastana waxay leedahay awood ay ku soo saarto faa'iidooyin badan.
Ties Guryaha Antioksidant
Faa'iidada ugu weyn ee lahaanshaha guryaha antioxidant -ka ayaa hoos u dhigta cadaadiska oksaydhka ee jirka. Cadaadiska Oxidative waxaa loola jeedaa culeyska ku dhaca unugyada iyo unugyada jirka taas oo ka dhalata falcelinta kiimikada ee soo saarta xeryo aan degganeyn, oo sidoo kale loo yaqaanno xagjirro lacag la'aan ah. Xag -jiryadan xorta ah waxay leeyihiin awood dheeri ah oo ay kaga qaybgalaan falcelinta kiimikada ee kacsan ee jirka, soosaarka ay waxyeeleeyaan unugyada iyo unugyada.
Urolithins waxay xakameysaa cadaadiska oksaydhka, taas oo keenta joojinta dhaawaca unugyada waxayna kordhisaa fursadaha badbaadada unugyada. Saameyntan waxaa suuragal ka dhigay hoos u dhigidda soo -saaridda Noocyada Oxygen ee Reactive Reactive (iROS), kuwaas oo ah nooc ka mid ah xagjirrada xorta ah. Intaa waxaa sii dheer, astaamaha antioxidant -ka ee Urolithin A iyo Urolithin B sidoo kale waxay ku soo baxaan hoos -u -dhigidda NADPH oxidase, taas oo muhiim u ah falcelinta kiimikada ee keenta walaaca oksaydhka.
Si loo soo saaro astaamaha antioxidant-ka, Urolithins waxay sidoo kale kordhisaa muujinta antioxidant heme oxygenase-1 iyada oo loo sii marayo Nrf2/ARE waddada calaamadeynta. Tani waxay ka caawineysaa inaysan yareynin xeryahooda waxyeellada leh laakiin sidoo kale waxay kordhiyaan enzymes wanaagsan oo kor u qaada astaamaha antioxidant.
Urolithins, marka la siiyo jiirarka leh dhaawaca maskaxda ee LPS, waxay hor istaagtay firfircoonaanta microglial, ama si fudud, nabar iyo sameynta caabuq taas oo kordhin doonta halista dhaawaca maskaxda ee joogtada ah. Saameyntan urolithins-ka ayaa la rumeysan yahay inay tahay isku-darka guryaha antioxidant-ka iyo guryaha ka-hortagga bararka.
Proper Guryaha La -dagaallanka Bararka
Astaamaha ka-hortagga bararka ee Urolithins waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sumcaddeeda ugu sii kordhaysa adduunka dheeraadka ah. Farsamooyinka ay iskudhafyadan, gaar ahaan Urolithin A, Urolithin B, iyo qaabkooda glucuronides, aad bay u kala duwan yihiin waxayna soo saaraan natiijooyin si siman u kala duwan.
Saamaynta ka-hortagga bararka ee Urolithin A iyo Urolithin B waxay leedahay farsamo la mid ah Daawooyinka Ka-hortagga-Steroidal Anti-inflammatory ama NSAIDs sida Ibuprofen iyo Aspirin. Urolithins waxaa loo yaqaanaa inay leeyihiin saameyn ka hortag ah soosaarka PGE2 iyo muujinta COX-2. Maadaama NSAID-yada ay horjoogsadaan muujinta labada COX 1 iyo COX 2, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in Urolithins ay leeyihiin saameyn ka-hortag barar oo xul ah.
Astaamaha ka-hortagga bararka ee Urolithins ayaa la caddeeyay inaysan kaliya la dagaallamin bararka jirka laakiin sidoo kale ay awoodaan inay dib u rogaan waxyeelada loo geystay xubnaha iyadoo ay sabab u tahay barar muddo dheer ah oo sababay in xubnahu ay shaqeyn waayaan. Daraasad dhowaan la sameeyay oo lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka, waxaa la ogaaday in isticmaalka urolithin uu awood u leeyahay inuu yareeyo nephrotoxicity-ku-dhalinta daroogada isagoo xakameynaya dhimashada unugyada kelyaha iyo bararka.
Waxaa la ogaaday in budada urolithin A, oo afka laga siiyay, ay saameyn ku reebtay waddada bararka oo ay weheliso cascade proapoptotic, sidaa darteed, waxay ilaalinaysaa shaqada kelyaha. Guryahaan Urolithin A oo ay weheliyaan urolithins -ka kale waxay tilmaamayaan mustaqbal halkaas oo xeryahooda laga yaabo in loo adeegsado daawo ahaan oo ay weheliyaan isticmaalkooda hadda oo ah kaabis.
Proper Guryaha La-Dagaalanka Kansarka
Urolithins-ka ayaa la rumeysan yahay inay yihiin kuwa ka-hortagga kansarka sababtuna tahay awoodda ay u leeyihiin inay yeeshaan saamayn sida xiritaanka wareegga unugyada, xannibaadda aromatase, soo-jeedinta apoptosis, xakamaynta burada, dhiirrigelinta autophagy, iyo waayeelnimada, qawaaniinta qorista oncogenes, iyo soo-dhoweeyeyaasha qodobka kobaca. Saameyntani, haddii ay maqan tahay, waxay sababi kartaa koritaanka aan caadiga ahayn ee unugyada kansarka. Astaamaha ka -hortagga Urolithins -ka ayaa la caddeeyay, gaar ahaan kansarka qanjirka 'prostate' iyo kansarka mindhicirka, iyadoo cilmi -baareyaal badan ay u soo urureen adeegsiga Urolithins inay yihiin ka -hortag suurtagal ah kansarka qanjirka 'prostate'.
Daraasad la sameeyay sanadkii 2018 ayaa lagu baaray saamaynta Urolithin ku yeelatay marinka mTOR iyada oo ujeedadu tahay helitaanka ikhtiyaarka daaweynta kansarka ganaca. Kansarka beeryarada wuxuu la xiriiraa heerarka dhimashada ee sarreeya, laakiin cilmi -baaris dhowaan la sameeyay ayaa muujineysa in Urolithin ay awoodi karto inay kordhiso oo keliya heerka badbaadada laakiin sidoo kale ay hor istaagto ku -tallaalididda unugyada burooyinka qaybaha kale ee jirka, taasoo dhalisay metastasis. Urolithin A si gaar ah ayaa loo darsay natiijooyinkana waxaa la barbardhigay natiijooyinkii ay soo saareen dawaynta caadiga ah. Waxaa la soo gabagabeeyey in Urolithin A ay soo saartay natiijooyin wanaagsan markii loo adeegsaday maaraynta kansarka ganaca, labada xaaladoodba; marka kaligeed la isticmaalo ama qorshaha daaweynta caadiga ah.
Baaritaan dheeri ah, faa'iidooyinka Urothilins ayaa laga yaabaa inay ugu dambeyntii ku jiraan daaweynta kansarka ganaca sidoo kale.
Ties Guryaha lidka bakteeriyada
Urolithins waxaa lagu yaqaanaa sifooyinkooda bakteeriyada waxayna leeyihiin saameyntan iyagoo xannibaya kanaalada isgaarsiinta ee jeermisyada, oo aan u oggolaan inay u dhaqaaqaan ama ku faafaan unugyada. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay inay leeyihiin astaamo antifungal, in kasta oo habka saxda ah uusan weli caddeyn.
Waxaa jira laba cudur oo Urolithins ay si gaar ah u saameeyaan xannibaadda, taas oo keenta ilaalinta jirka aadanaha. Cudurradan ayaa ah microbes -ka duumada iyo Yersinia enterocolitica, oo labadooduba keena caabuqyo daran oo ku dhaca aadanaha. Habka ay Urolithins u leedahay astaamaha bakteeriyada iyada oo aan loo eegin noolaha waa isku mid.
● Anti Estrogenic iyo Estrogenic Properties
Estrogen -ku waa hormoon muhiim u ah jirka dheddigga, hoos u dhaca heerarkiisuna wuxuu la xiriiraa astaamo ay ka mid yihiin daadinta, gubashada kulul, iyo cufnaanta lafaha oo hoos u dhacda. Marka la eego ahmiyadda hormoonka, waxay macno samaynaysaa in beddel si firfircoon loo baadho. Si kastaba ha noqotee, hormoonnada ka baxsan waxay leeyihiin waxyeellooyin qaarkood oo ka dhigaya isticmaalkooda mid aan la jeclayn.
Si kastaba ha noqotee, Urolithin A iyo Urolithin B waxay leeyihiin qaab dhismeed la mid ah estrogen endogenous iyo isku xirnaanta soo -dhoweeyeyaasha estrogen ee jirka. Urolithin A wuxuu leeyahay xiriir adag, gaar ahaan soo -dhoweeyaha alfa marka la barbar dhigo soo -dhoweeyaha beta. In kasta oo labadan xeryood ay leeyihiin qaab-dhismeedyo la mid ah estrogen, urolithins-ku waxay leeyihiin astaamo estrogenic iyo anti-estrogenic labadaba, oo ka duwan estrogen-ka endogenous.
Laba -lahaanshaha saameyntan ee Urolithins ayaa ka dhigaysa iyaga ikhtiyaar daaweyn suuragal ah oo loogu talagalay xanuunnada qaarkood ee soo ifbaxa marka estrogen -ka ka baxsan la siiyo si loo daaweeyo astaamaha yaraanta estrogen.
Hib Xayiraadda Jilicsanaanta Protein -ka
Glycation -ka borotiinku waa geedi socod kaas oo molecule sonkor ku xidhan yahay borotiin. Nidaamkan waxaa la arkaa inta gabowgu ama qayb ka yahay xanuunnada qaarkood. Urolithins-ku waxay horjoogsadaan ku-darka sonkorta, sidaa darteed waxay keenaysaa saameynta ka-hortagga glycation. Intaa waxaa sii dheer, waxay horjoogsadaan samaynta gulukooska horumarsan ee horumarsan, uruurinta taas oo ah tallaabo muhiim u ah jiritaanka cudurada sonkorowga.
Urolithins waxay leeyihiin habab kala duwan oo ficil si ay u soo saaraan faa'iidooyin ilaalin oo kala duwan oo ku jira jirka aadanaha. Budada Urolithin A iyo budada Urolithin B waxay gacan ka geystaan ​​soo saarista kaabayaasha caanka ah sababta oo ah faa'iidooyinka maaddooyinka waaweyn. Dhammaan faa'iidooyinka xeryahooda kiimikada ah waxaa taageera caddayn saynis, iyo xitaa cilmi -baaris dheeraad ah ayaa la sameeyaa si loo taageero ku -daridda Urolithins ee tilmaamaha daaweynta dhowr cudur.
Faa'iidooyinka xeryahooda, oo ku saleysan farsamooyinka kor ku xusan, waxaa ka mid ah:
Urolithins waxaa laga soo saaraa dhowr cunno oo hodan ku ah ellagitannins oo laftooda la og yahay inay hodan ku yihiin antioxidants. Ilaha cuntada ugu badan ee loogu talagalay ellagitannins iyo ellagic acid waa rummaanka, sidoo kale waa isha weyn ee antioxidants. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la kala garto haddii astaamaha antioxidant -ka ilaha cuntada iyo urolithins ay isku mid yihiin ama haddii mid ka awood badan yahay kan kale.
Daraasadihii ugu horreeyay ee Urolithin A iyo Urolithin B waxay muujiyeen in saamaynta antioxidant ee kuwan ay 42 jeer ka yar yihiin midhaha lafteeda, sidaa darteed waxay muujineysaa in xeryahooda kiimikada aysan u samayn doonin maaddooyin wanaagsan oo dheeri ah.
Si kastaba ha noqotee, daraasado dhowaan la sameeyay oo leh habab kala duwan oo falanqayn ayaa muujinaya in Urolithin A iyo B labaduba ay yihiin kuwo aad waxtar u leh isla markaana leh astaamo antioxidant awood leh oo la dagaallami doona saameynta walaaca oksaydhka. Markii isla habkii falanqaynta loo adeegsaday in lagu barto dhammaan urolithins si loo arko midka ugu awoodda badan, Urolithin A ayaa istaagay. Natiijooyinka ayaa markaa lagu soo saaray daraasad la mid ah Urolithin A oo hoggaanka u haysa awoodda, mar labaad.
Xaqiiqdii, mid ka mid ah daraasadaha ayaa diiradda saaray qiimeynta astaamaha antioxidant -ka ee xeryahooda kiimikada ah iyagoo tijaabinaya awooddooda ay kula dagaallamaan walaaca oksaydhka. Ujeeddada daraasaddan, cilmi -baarayaashu waxay walaac ku abuureen unugyada neuronal -ka iyo markay la kulmaan Urolithins, gaar ahaan Urolithin B, waxay dareemeen hoos u dhac ku yimid walaaca oo ay weheliso sii -noolaanshaha unugyada neuronal -ka.
Astaamaha ka hortagga bararka ee Urolithins waxay soo saaraan faa'iidooyin dhowr ah, kuwaas oo dhammaantood si cilmiyeysan loo xaqiijiyay.
1.Saamaynta aan caadiga ahayn
Daaweynta guriga lagu daweeyo ee duumada oo si weyn looga isticmaalo meelaha miyiga ah qaarkood ayaa ku lug leh adeegsiga Rumaanka. Cilmi -baadhayaashu waxay isku dayeen inay fahmaan saamaynta togan ee daawadani ku leedahay daaweynta duumada iyagoo isku xiraya natiijooyinka saamaynta Urolithins -ka metabolized ee mindhicirka laga soo qaaday rummaanka.
Daraasad ayaa la sameeyay si loo barto saamaynta Urolithins ee daaweynta duumada iyada oo u soo bandhigtay unugyada monocytic cudurka Urolithins. Daraasadani waxay ogaatay in xeryahooda kiimikadu ay horjoogsadaan sii deynta MMP-9, oo ah metalloproteinase muhiim u ah horumarka iyo jiritaanka cudurka duumada. Ka -hortagga xaruntu waxay ka horjoogsataa duumada inay jidhka ku keento cudur, sidaa darteed sababta loo rumaysan yahay inay leedahay saamayn ka -hortagga cudurka.
Natiijooyinka daraasadda ayaa sidoo kale muujisay in Urolithins -ku ay hor istaagtay muujinta mRNA ee cudur -sidaha duumada, taasoo dhalisay in la sii hor -joogsado awoodda jeermisyada 'u keeni karto caabuq. Natiijooyinka daraasaddan ayaa caddaynaysa in saamaynta faa'iido leh ee dawooyinka guriga lagu sameeyo oo ay ku jiraan rummaanka ay sabab u tahay saamaynta urolithin.
2. Saameyn ku yeelataa Unugyada Dhamaadka
Atherosclerosis waa xaalad caadi ah oo horseedaysa aflagaado wadnaha ah iyo wadne -qabad myocardial. Labada arrimood ee caadiga ah ee ka dambeeya horumarinta atherosclerosis waa cillad endothelial iyo barar. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay isku dayeen inay caddeeyaan in astaamaha ka hortagga bararka ee Urolithin ay awood u yeelan karto inay ka hortagto cillad la'aanta endothelial, sidaa darteedna, maareyso sameynta atherosclerosis iyo horumarka.
Urolithin A waxaa cilmi-baarayaashu ku ogaadeen inuu leeyahay tallaalka ka-hortagga bararka ee ugu sarreeya dhammaan urolithins-ka. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa diiradda saareysay unugyada endothelial-ka aadanaha ee lagu shubay LDL oksidiin ah, oo shardi u ah sameynta atherosclerosis, iyo uruurinta kala duwan ee Urolithin A. Cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in Urolithin A uu joojiyay isku-darka nitric oxide oo yareeyay muujinta I-CAM, taasoo keentay yaraynta caabuqa iyo hoos u dhaca awoodda unugyada, gaar ahaan monocytes si ay ugu hoggaansamaan unugyada endothelial, siday u kala horreeyaan. Hoos -u -dhaca monocytic -ka oo yaraada wuxuu yareeyaa cillad -darrada endothelial.
Waxaa intaa dheer, Urolithin A waxaa lagu ogaadey inuu yareeyo muujinta necrosis factor α, interleukin 6, iyo endothelin 1; dhammaan cytokines pro-inflammatory.
3. Saameyn ku yeelataa Fibroblasts -ka xiidmaha
Colon wuxuu la kulmaa cudur -sidayaal ka -baxsan iyo qaybo cunto oo ka dhiga mid u nugul caabuq, kaas oo mustaqbalka fog u horseedi kara dhowr arrimood oo caafimaad. Maadaama Urolithin A iyo Urolithin B ay soo saaraan dhirta mindhicirka, waxaa muhiim ah in la ogaado saameyntooda meesha ugu horeysa ee jirka ay sameystaan.
Si loo barto saamaynta Urolithins ee unugyada xiidmaha iyo fibroblasts-ka, cilmi-baarayaashu waxay sameeyeen tijaabo halkaasoo fibroblasts-ka ay u soo gaadheen cytokines pro-inflammatory ka dibna Urolithins. Sidaan kor ku soo sheegnay, waxaa la ogaaday in Urolithins -ku ay horjoogsato adhesion monocyte iyo guuritaanka fibroblast si loo xakameeyo bararka xiidanka.
Waxaa intaa dheer, waxaa la ogaaday in Urolithins-ku ay horjoogsadeen dhaqaajinta qodobka NF-κB, oo muhiim u ah qawaaniinta caabuqa. Xaqiiqdii, cilmi-baarayaashu waxay rumeysan yihiin inay tani tahay qodobka ugu weyn ee ka dambeeya astaamaha ka-hortagga bararka ee urolithins.
Urolithins-ku waxay la xiriiraan guryaha ka hortagga kansarka, farsamooyinka guryahaasna kor ayaa lagu sheegay. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka guryahaani waa kuwa hoos ku xusan:
1.Ka -hortagga kansarka qanjirka 'prostate'
Ogaanshaha Urolithins -ka jirka waxaa badanaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo dhiigga ama kaadida; hase yeeshee, waxaa lagu ogaan karaa xiidanka labka iyo dheddigga labadaba iyo qanjirka qanjidhka ragga.
Natiijada natiijadan, cilmi -baarayaashu waxay isku dayeen inay qiimeeyaan haddii faa'iidooyinka xeryahooda kiimikada ay ka muuqdaan qanjirka 'prostate' sida ay ku jiraan xiidanka. Sidaa darteed, daraasad ayaa la naqshadeeyay, taas oo natiijadoodu caddeysay in Urolithins ay saameyn difaac ku leedahay qanjirka 'prostate'.
Waxaa la ogaaday in Urolithin A iyo Urolithin B, oo ay weheliso Urolithin C iyo Urolithin D ay hor istaageen enzyme CYP1B1 qanjirka 'prostate'. Enzyme -kan ayaa ah bartilmaameedka kiimoteraabiga waxaana aad u hor istaagay Urolithin A, marka loo eego urolithins -ka kale. Waxay sidoo kale horjoogsadeen CYP1A1, si kastaba ha ahaatee, fiirinta sare ee urolithins ayaa loo baahan yahay si loo soo saaro saameyntaas.
Daraasad kale ayaa la sameeyay si loo barto saamaynta ka -hortagga qanjirka 'prostate' ee Urolithins. Waxaa la ogaaday in Urolithin A uu saamayn kansarka kahortagga kansarka qanjirka 'prostate' ku marayo, p53 ku-tiirsanaan iyo p53 si madaxbannaan.
2.Topoisomerase 2 iyo CK 2 xannibaad
Urolithins waxay leeyihiin astaamo ka-hortagga kansarka iyada oo la xakameeyo dhowr dariiq oo molikaliye ah kuwaas oo si toos ah ama si dadban u horseedaya ka-hortagga koritaanka kansarka. Enzyme CK2 waa enzme muhiim ah oo ka qayb qaata dariiqyada molikalikada, iyada oo shaqadeeda ugu weyni ay tahay kor u qaadista caabuqa iyo kansarka.
Urolithins-ku waxay horjoogsadaan dariiqyo kala duwan si ay u gaaraan enzim-ku-meel-gaar ah, CK2 si aakhirka loo xakameeyo saameyntooda, sida astaamaha kor u qaada kansarka. Urolithin A waxaa lagu muujiyey inuu yahay ka hortag CK2 awood leh, silico ah.
Sidoo kale, joojinta Topoisomerase 2 ayaa la rumeysan yahay inay leedahay saameyn liddi ku ah kansarka. Xaqiiqdii, farsamadan waxaa adeegsada wakiilada kiimoteraabiga qaarkood sida Doxorubicin. Daraasad dhowaan la sameeyay, waxaa la ogaaday in Urolithin A uu ka awood badan yahay Doxorubicin si looga hortago Topoisomerase 2, sidaa darteed, isagoo ku baaqaya in lagu daro tilmaamaha hadda jira ee daaweynta kansarrada qaarkood.
Astaamaha bakteeriyada ee Urolithins waxay ku tiirsan yihiin Quorum Sensing Inhibition taas oo ka qaadaysa awoodda jeermisyada si ay ula xiriirto, u dhaqaaqdo, oo u samayso arrimo faafa. Waa farsamo muhiim u ah jiritaanka bakteeriyada, iyo ka -hortaggiisa Urolithins wuxuu u dhintaa jeermisyada.
Hantida ugu weyn ee bakteeriyada ee Urolithin waa kartida ay u leedahay inay ka ilaaliso mindhicirka kororka Yersinia enterocolitica. Xaqiiqdii, Urolithins waxay la xiriiraan isbeddelka flora mindhicirka, isla flora kaas oo mas'uul ka ah soo -saarkooda meesha ugu horeysa. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay maadaama uunleyda gaarka ah ee flora -du ay kordhin karaan wax soo saarka Urolithins.
Urolithins waxay ku xidhan yihiin soo-dhoweeyeyaasha Estrogen waxayna soo saaraan labadaba, astaamaha estrogenic iyo anti-estrogenic. Tani waxay ka dhigaysaa musharrax aad u weyn Modulators Receptor Estrogen Receptor ama SERMs, habka ugu weyn ee ay tahay inuu saamayn togan ku yeesho hal aag oo jirka ka mid ah iyo saamayn ka hortag ah aagga kale ee jirka.
Mid ka mid ah daraasadihii lagu sameeyay saamaynta urolithins-ka ee soo-dhoweeyeyaasha estrogen, waxaa la ogaaday in iyaga, gaar ahaan urolithin A, ay horjoogsadaan muujinta hidda-wadaha unugyada kansarka endometrial ER-positive, taasoo dhalisay xakamaynta kansarka endometrial. Dhiig -karka 'Endometrial hypertrophy' waa saamayn caadi ah oo ah estrogen -ka ka baxsan neoplasia post -ka sida dumarka qaadanaya daaweynta beddelidda hormoonka, iyo adeegsiga urolithins ayaa la rumeysan yahay inay saameyn difaac ku leedahay endometrium. Si kastaba ha noqotee, baaritaan dheeri ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo ka hor inta Urolithins aysan noqon daawada SERM ee soo socota.
Jiritaanka alaabooyinka dhammaadka glycation horumarsan ayaa astaan ​​u ah hyperglycemia oo dadka u sahasha dhaawaca wadnaha ee la xiriira sonkorowga ama xitaa cudurka Alzheimers. Urolithin A iyo Urolithin B ayaa la muujiyey inay leeyihiin saamayn anti-glycation ah oo ka hortagta aflagaadada wadnaha oo si weyn u yareyneysa halista neurodegeneration.
Sidaa darteed, ka -hortagga glycation -ka borotiinka ee Urolithins ayaa la rumeysan yahay inuu leeyahay saameyno wadnaha iyo neerfaha labadaba.
Faa'iidooyinka Urolithin A si gaar ah ayaa hoos loogu xusay:
Kordhi cimriga nolosha
Gabowga, walbahaarka, iyo jirrooyinka qaarkood ayaa dhaawici kara mitochondria, oo muhiim u ah wax soo saarka tamarta caadiga ah iyo isticmaalka jirka. Waxaa intaa dheer, mitochondria waxaa badanaa loogu yeeraa 'awoodda quwadda', taas oo tilmaamaysa muhiimadda ay leedahay shaqada caadiga ah ee unugga. Sidaa darteed, waxyeello kasta oo soo gaarta korontadani waxay si xun u saamayn doontaa unugga oo aad bay u yareyn doontaa cimrigiisa.
Urolithins waxay kiciyaan saameyn gaar ah oo loo yaqaan mitophagy taas oo u oggolaanaysa jirka inuu ka saaro mitochondria waxyeelloobay, iyadoon loo eegin sababta waxyeellada, iyo kordhinta cimriga. Iyada oo ku saleysan baaxadda dhaawaca, mitochondria waxaa laga yaabaa in dib loo warshadeeyo nafaqooyinka iyo wax soo saarka tamarta.
Sidaan kor ku soo sheegnay, urolithins-ku waxay leeyihiin astaamo kahortaga bararka waana astaamahaas kor u qaada sameynta unugyada neuronal ee maskaxda, taas oo saameyn togan ku leh garashada iyo haynta xusuusta. Intaa waxaa dheer, Urolithin A wuxuu ka ilaaliyaa neurodegeneration -ka lagu arkay cudurka Alzheimers, sidaa darteed, saameynta neerfaha.
Ka -hortagga Kansarka Qanjirka 'prostate'
Urolithin A waxay leedahay sifooyin kansarka lidka ku ah laakiin waxay si gaar ah ugu muuqdaan marka laga hadlayo kansarka qanjirka 'prostate', iyadoo dhowr daraasadood lagu dhiirrigelinayo adeegsiga rummaanka iyo ilaha kale ee Urolithins ee daaweynta kansarka qanjirka 'prostate'.
Urolithin A wuxuu leeyahay saamaynta ka hortagga buurnaanta maadaama aysan kaliya horjoogsanayn uruurinta unugyada dufanka ah ee jirka laakiin sidoo kale wuxuu horjoogsadaa astaamaha mas'uulka ka ah adipogenesis. Daraasad lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka, ayaa lagu ogaaday in Urolithin A ay saameyn sare ku leedahay hormoonka T3 -ta thyroid, taasoo keenta kororka kharashka tamarta ee jiirarka. Tani waxay kicisaa thermogenesis waxayna keentaa in baruurtii baruurtii ay dhalaasho, halka dufanka cadna la geliyo baalal.
Isla daraasaddan, ayaa lagu ogaaday in URolithin A ay leedahay saamayn ka hortag ah cayilka xitaa jiirarka la quudiyey cunto dufan badan leh. Tani waxay muujineysaa ballanqaad weyn illaa iyo inta cayilka laga hadlayo waxayna cilmi -baarayaashu ku baaqeen codsiyada aadanaha ee natiijooyinkan inay awood u yeeshaan inay u adeegsadaan dhismahan si ay ula dagaallamaan cudurka buurnida.
Faa'iidooyinka Urolithin B waa sida soo socota:
● Ka hortag lumitaanka muruqa
Urolithin B wuxuu la wadaagaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka Urolithin A laakiin wuxuu leeyahay hal faa'iidooyin gaar ah, oo u gaar ah keligiis. Urolithin B waxaa loo yaqaanaa inay ka hortagto luminta muruqyada labada xaaladood ee jir ahaaneed iyo cudurada. Waxaa intaa dheer, waxay kor u qaadeysaa kobaca muruqa qalfoofka iyadoo kordhineysa isku -darka borotiinka ee muruqyada.
Waxa kale oo ay leedahay saamayn ka -hortag ah oo ku timaadda muruqyada sida lagu arkay daraasad lagu sameeyay jiirarka oo la gooyay dareemayaashii naftooda. Tani waxay u horseedi lahayd murqaha oo yaraada laakiin jiirarka waxaa lagu beeray bambooyin yaryar oo osmotic ah oo si joogto ah u siiya Urolithin B. Waxaa la ogaaday in jiirarkan ay leeyihiin marin-u-meel-proteasome-koodii la cabudhiyay, taas oo horseedday maqnaansho cad oo muruqa .
Urolithins-ku waxay ka soo jeedaan xeryahooda dabiiciga ah oo kaabayaashooda waxaa loo tixgeliyaa inay si wanaagsan u dulqaadan karaan oo aysan jirin wariye sumeeya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo in xeryahooda ay wali ku jiraan cilmi baaris ayna leeyihiin xadka qiyaasta oo ay tahay in si adag loo raaco.
Ka dib baaritaan ballaaran oo ku saabsan faa'iidooyinka Urolithin A, waxaa jiray dhowr daraasadood oo cilmi baaris ah oo la sameeyay si loo qiimeeyo qiyaasta saxda ah ee dhismahan kiimikada ah. Daraasadda nuugista, dheefshiidka, dheef -shiid kiimikaadka, iyo baabi'inta ayaa la sameeyay si loo falanqeeyo astaamaha xarunta.
Daraasadda ayaa loo qaybiyay laba, iyadoo ku xiran tirada maalmaha, waxaana la ogaaday in daraasadda 28-ka maalmood ah ee 0, 0.175, 1.75, iyo 5.0% ee Urolithin A lagu daray cuntada iyo daraasadda 90-ka maalmood ah 0, 1.25, 2.5, iyo 5.0% Urolithin A isku darka cuntada ma muujin wax isbeddel ah oo ku saabsan xuduudaha kiliinikada, kiimikada dhiigga, ama dhiig -baxa, mana tusin wax farsamooyin sun ah oo gaar ah. Labada daraasadoodba waxay qaateen qiyaasta ugu sarraysa oo lagu tijaabiyey 5% UA miisaanka cuntada taas oo keentay qiyaasaha soo socda; 3451 mg/kg BW/maalintii ragga iyo 3826 mg/kg BW/maalintii dheddigga daraasadda afka ah ee 90-ka maalmood ah.
Si la mid ah Urolithin A, Urolithin B ayaa si weyn loo baaray si loo qiimeeyo qiyaasta ugu fiican. In kasta oo ay muhiim tahay in la ogaado in daraasaduhu ay diiradda saareen qiyaasta badbaadsan si loo gaaro kororka muruqa ee ugu habboon. Qiyaastan waxaa lagu ogaaday inay tahay 15uM, labada jinsiba, iyadoon loo eegin miisaanka.
Xaruntaan sidoo kale waa la isticmaalaa, badanaa sababta oo ah waa dhexdhexaad inta lagu jiro soosaarka Urolithin A. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris ku filan looma samayn qiyaas ku habboon oo lagu go'aaminayo Urolithin -kan gaarka ah.
Ilaha Cuntada ee Urolithins
Urolithins si dabiici ah lagama helo ilaha cuntada, hase yeeshe, waxaa laga helaa ellagitannins. Tannins-ku waxay u jajabaan aashitada ellagic, taas oo sii dheereyneysa Urolithin A 8-Methyl ether, ka dibna Urolithin A, iyo ugu dambeyn, Urolithin B. Cuntooyinka hodanka ku ah Urolithins waa:
Miraha (mg/100g miisaan cusub)
Miraha jaalaha ah
Khamri cas oo duug ah
Sida miiska lagu arkay, Cloudberries waa miraha leh Ellagitannins -ka ugu sarreeya iyo Ellagic acid, oo Rummaanka sida ilbidhiqsi dhow. Juuska rummaanka, si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii waa il ka awood badan, ku dhawaad ​​saddex jeer ka awood badan Cloudberries.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in waxyaabaha ku jira ellagic acid ee ku jira ilaha cuntada aysan u dhigmin isla urolithin jirka ku jira. Noolaha noolaha ee URolithins wuxuu aad ugu tiirsan yahay microbiota mindhicirka ee qof kasta.
Maxaad uga Iibsanaysaa Warshadeena Soo -saaraha?
Urolithin Powder A iyo Urolithin Powder B ayaa si weyn looga heli karaa, warshadeena wax -soo -saarka ee isku -darka wax -soo -saarka, cilmi -baarista, horumarinta, iyo iibinta kaabayaasha noocaas ah. Badeecadaheena waxaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo si sax ah oo xad dhaaf ah si loo raaco dhammaan tilmaamaha amniga, kaasoo hubiya tayada sare iyo badbaadada badeecada ugu dambeysa. Dhammaan badeecadaha waa la baaraa ka hor inta aan la soo saarin si fiican ayaana loo tijaabiyaa inta lagu jiro iyo kadib wax soo saarka si loo buuxiyo heerarkaaga tayada.
Soo -saaridda ka dib, alaabooyinka ayaa lagu tijaabiyaa shaybaarradayada hal mar si loo hubiyo tayada, awoodda, iyo badbaadada budada Urolithin iyo alaabooyinka kale. Markay diyaar u yihiin qaybinta, badeecadaha ayaa la buuxiyaa oo lagu kaydiyaa tas-hiilaadka ku habboon, heerkulka saxda ah iyadoo la raacayo dhammaan tilmaamaha si loo dammaanad qaado in alaab tayo sare leh ay ku soo gaadho. Budo Urolithin kuma dhacdo iftiinka qorraxda inta lagu jiro gaadiidka, baakadaha, ama kaydinta taas oo dhaawici karta badeecada ugu dambaysa.
Iibsashada budada Urolithin A iyo budada Urolithin B oo ka timaada warshad soo saarahayagu waxay dammaanad qaadayaan badeecad tayo sare leh qiimo aad u jaban.
Waa maxay Urolithin A?
Urolithin A (UA) waxaa si buuxda u soo saara bakteeriyada mindhicirka bini'aadamka oo soo gaadha xeryahooda polyphenolic ee cuntada oo ay ku jiraan ellagic acid (EA) iyo ellagitannins (ET), sida punicalagin. Horudhacyadan polyphenolic ayaa si weyn looga helaa miraha (rummaan iyo miraha qaarkood) iyo lawska (walnuts iyo pecans).
Urolithin A (UA) waa isku-dhafan microbiome-ka-soo-baxa oo leh faa'iidooyinka caafimaad ee gabowga iyo cudurrada. Dhowr badeecooyin cunto ah ayaa ka kooban polyphenols ellagitannins (ETs) iyo ellagic acid (EA). Marka la nuugo, UA waxay si togan u saamaysaa mitochondrial iyo caafimaadka gacanta ee xaaladaha iyo cudurrada da'da la xiriira.
Miraha ka kooban Urolitin A?
Ilaha laga helo ellagitannins waa: rummaanka, lowska, miraha qaar (raspberries, strawberries, blackberries, cloudberries), shaaha, canabka muscadine, miraha badan ee kuleylaha, iyo khamri da 'ah (miiska hoose).
Mindhicirka microbiota metabolizes ellagic acid taasoo keentay samaynta urolitins bioactive A, B, C, iyo D. Urolithin A (UA) waa dheef-shiid kiimikaad ugu firfircoon iyo waxtarka leh oo u dhaqmo sida wakiilka awood anti-bararka iyo anti-oxidant.
Maxay Urolitin u fiican tahay?
Urolithin A waxay kicisaa mitophagy waxayna kordhisaa cimriga C. elegans waxayna kordhisaa shaqada muruqa ee jiirka.
Ilaha cuntada ee urolitin A
Ilaa hadda, cilmi-baaristu waxay ogaatay in rummaanka, strawberries, blackberries, camu-camu, walnuts, chestnuts, pistachios, pecans, shaaha la dubay, iyo khamriga foosto-da'da ah iyo rooxaanta ay ku jiraan ellagic acid iyo/ama ellagitannins.
Urolithin A (UA) waa cunto dabiici ah, dheef-shiid kiimikaad ka soo jeeda microflora oo lagu muujiyey inay kiciso mitirka oo ay wanaajiso caafimaadka muruqa ee xayawaankii hore iyo moodooyinka hore ee gabowga.
Sideen uga heli karnaa Urolitin A cunnadayada?
Mitopure waa nooc gaar ah oo saafi ah oo Urolithin A. Waxay ka caawisaa jirkeena inuu ka hortago hoos u dhaca unugyada da'da la xiriira iyadoo dib loo soo nooleynayo koronto-dhaliyeyaasha gudaha unugyadeena; ie mitochondria our. Urolithin A waxay wanaajisaa shaqada mitochondrial iyo muruqa, taasoo siisa tamar badan unugyada.
Mitopure ma u badbaado isticmaalka bani'aadamka?
Intaa waxaa dheer, daraasadaha kiliinikada ee bini'aadamka Mitopure waxaa la go'aamiyay in ay badbaado tahay. (Singh iyo al, 2017). Mitopure waxaa sidoo kale si wanaagsan dib u eegay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) ka dib markii GRAS (guud ahaan loo aqoonsaday inay badbaado tahay) xereynta.
Waxaan kugula talineynaa inaad qaadato laba jilbaha Mitopure maalintii si loo helo natiijooyin wanaagsan. Inta aad qaadan karto Mitopure wakhti kasta oo maalintii ah, waxaanu kugula talinaynaa inaad quraacda ku qaadato, maadaama uu yahay borotokoolkii aanu ku isticmaalnay tijaabooyinkayaga caafimaad.
Waa maxay Urolitin kabitaan?
Urolithin A (UA) waa isku-dhafan microbiome-ka-soo-baxa oo leh faa'iidooyinka caafimaad ee gabowga iyo cudurrada. Dhowr badeecooyin cunto ah ayaa ka kooban polyphenols ellagitannins (ETs) iyo ellagic acid (EA). Marka la cuno cuntooyinkan oo kale, ETs iyo EA waxaa metabolized UA by microflora ee xiidmaha weyn.
Urolitin A faa'iidooyinka dheeraadka ah
Urolitin A waxay wanaajisaa shaqada mitochondrial iyo muruqa, taasoo siisa tamar badan unugyada. Waa xarun dabiici ah oo ka hortag ah gabowga oo ka faa'iideysan kara qof kasta oo raadinaya inuu si firfircoon u ilaaliyo caafimaadka muruqa.
Urobolin waa kabitaan ka timaadda punica granatum (Pomegranate) kaas oo lagu jaangooyey Urolithin B. Urobolin kaab ahaan waxay yareyn kartaa dhaawaca muruqa ee soo gaara inta lagu jiro jimicsiga xoogga leh waxayna ka ilaalineysaa muruqa culeyska ay keento cunto dufan badan leh.
Totiger TM, Srinivasan S, Jala VR, et al. Urolithin A, oo ah Iskuduwaha Dabiiciga ah ee Nolosha lagu beegsanayo PI3K/AKT/mTOR Pathway ee Kansarka Pankreatic. Mol Cancer Ther. 2019; 18 (2): 301-311. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-18-0464.
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV. Urolithin A wuxuu yareeyaa nephrotoxicity-ka Cisplatin-ku-haleeshay isagoo ka hortagaya caabuqa kelyaha iyo Apoptosis-ka ee ku jira Qaabka Jiirka Tijaabada ah. J Pharmacol Exp Ther. 2017; 363 (1): 58-65. doi: 10.1124/jpet.117.242420.
Juan Carlos Espín, Mar Larrosa, María Teresa García-Conesa, Francisco Tomás-Barberán, "Muhiimadda Biyoolojiga ee Urolithins, Gut Microbial Ellagic Acid-Deto Metabolites: Caddaynta Illaa Hadda", Dhammaystirka Ku-saleysan iyo Daawada Kale, vol. 2013, Qodobka Aqoonsiga 270418, 15 bog, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/270418.
Lee G, Park JS, Lee EJ, Ahn JH, Kim HS. Ka-hortagga bararka iyo hababka antioxidant ee urolithin B ee microglia firfircoon. Phytomedicine. 2019; 55: 50-57. doi: 10.1016/j.phymed.2018.06.032.
Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X. Urolithin A waxay hoos u dhigtaa dib-u-dhac ku yimaadda dib-u-kicinta endothelial ox-LDL qayb ahaan iyadoo la hagaajinayo microRNA-27 iyo ERK/PPAR-γ. Cuntada Mol Nutr Res. 2016; 60 (9): 1933-1943. doi: 10.1002/mnfr.201500827.